Fampianarana tantara sy fampihavanana amin'ny fiarahamonina miady (post) - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Oktobra 13, 2021 Research 0
“… Ny fahatakarana ny tantara dia zava-dehibe amin'ny fahafahan'ny fiarahamonina isaina amin'ny lasa sarotra noho ny ho avy ara-drariny kokoa.”
(Navoaka avy amin'ny: Mihoatra ny tsy fahazoana mamidy. 19 Mey 2020)
Ireo tantara ampianarintsika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fomba fahitana ny fifanolanana amin'izao fotoana izao. Araka ny namaranan'i Cole (2007, 123) azy, "… ny fahatakarana ny tantara dia zava-dehibe amin'ny fahafahan'ny fiarahamonina isaina amin'ny lasa sarotra noho ny ho avy ara-drariny kokoa." Ity lahatsoratra ity dia mihevitra ny anjara asan'ny fanabeazana tantara amin'ny famolavolana ny fahatsiarovan-tena iraisana sy ny fifandraisan'ny vondrona eo amin'ny tontolon'ny fifandonana. Ny fanabeazana ny tantara dia mifamatotra amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana (jereo Brahm 2006) amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fomba fiantsoana ny tantara momba ny herisetra taloha sy ny fananganana (aorian'ny) toerana fanabeazana mifanditra. Ny fanondroana ny toe-javatra "(post) fifandonana" toa izany dia manaiky fa na dia vita sonia aza ny fifanarahana fandriam-pahalemana na nijanona ny herisetra mivantana, dia mitohy hatrany ny fifandonana amin'ny fahatsiarovana sy ny mombamomba ireo vondrona ao amin'ireo fiarahamonina ireo. Ny fampianarana tantara dia afaka mandray anjara amin'ny fampihavanana amin'ny fanampiana amin'ny fanekena ny fahamarinana sarotra momba ny lasa, ary koa ny fanavaozana ny fomba fijerin'ny vondrona sy ny hevitra momba ny mety hisian'ny fiaraha-miasa amin'ireo fahavalo taloha amin'ny ho avy. Ireo orient orientations a retractive sy prospective ireo dia samy miteraka vintana sy sakantsakana amin'ny fampianarana tantara ao anatin'ny tontolon'ny fifandonana.
Amin'izay manaraka, omena topimaso ny fomba fijery teôria lehibe ilaina hahalalana ny fiantraikan'ny fanabeazana ny tantara amin'ny fampihavanana no omena - ao anatin'izany ny hypothèse contact, ny teoria momba ny maha-olona ary ny fandinihana fitadidiana. Manaraka izany, ity lahatsoratra ity dia mihevitra ny fomba azo ampiharina amin'ny fampiasana ny fanabeazana ny tantara mba hampifanarahana ireo vondrona mizarazara momba ny pedagogy, ny fanitsiana ny boky fampianarana, ary ny fampianarana ny tantara nifaninana na teo amin'ny sehatry ny fanabeazana na ny fampianarana. Mandritra ireo fizarana ireo dia misy porofo mivaingana avy amin'ny santionany tsy misy tranga tranga (post) manerana an'izao tontolo izao mba hamintinana ny faran'ny fahalalana momba ny fiantraikan'ireny fomba fiasa ireny sy hamantatra ireo fetra sy banga tavela. Ary farany, ity lahatsoratra ity dia nifarana tamin'ny tolo-kevitra lehibe ho an'ireo mpanao politika, manam-pahaizana ary mpanabe nalaina avy tamin'ity haisoratra ity momba ny fomba hampidirana ny fanabeazana ny tantara amin'ny ezaka fampihavanana.
Fomba fijery teorika
Andiam-pikarohana iray manadihady ny fifandraisana misy eo amin'ny fanabeazana sy ny fampihavanana amin'ny (post) tontolon'ny fifandonana dia manantitrantitra ny fifandraisan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona mifanohitra amin'ny sehatry ny fanabeazana ho an'ny tanjon'ny fianarana miaraka sy amin'ny tsirairay. Ny fandinihana amin'ity faritra ity dia nalaina avy tamin'ny "hypothèse contact" nataon'i Allport (1954), izay milaza fa ny fifampitondrana misy eo amin'ny vondrona misy ny fitoviana, ny tsy fifaninanana ary ny fahafantarana ny "hafa" dia mety hitarika fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny vondrona (araka ny voatonona ao amin'ny Schulz 2008, 34). Ity hypothèse ity dia mihevitra fa ny fifanoherana dia mifototra amin'ny fomba fijery ratsy ny "hafa" izay mitohy noho ny fisarahan'ny vondrona tsirairay avy amin'ny iray hafa. Ny literatiora ara-tsosialy-ara-tsosialy goavambe amin'ny fifandraisana an-tsokosoko dia nahita porofo manamarina fa afaka mampihena ny fitsarana an-tendrony, ny fanahiana ary ny fanavakavahana izy io ary mampiroborobo ny fiaraha-miory eo amin'ny vondrona, milaza ny lanjan'izy ireo ho fitaovana amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana (jereo Mania et al. 2010).
Na dia misy aza ny fitsabahana mifantoka amin'ny fampihavanana maro hafa toy ny fifanakalozan-kevitra sy ny tetik'asa iraisana dia mety hiankina amin'ny fifandraisan'ny vondrona ho foto-kevitra teorika ihany koa, Schulz (2008, 35-36) dia nanamafy fa ny sehatra fanabeazana manokana dia afaka mamorona "sehatra ara-tsosialy" ahafahan'ny antoko miditra fifanandrinana tsy misy herisetra ary hampiroborobo ny fampihavanana. Ireo fihaonana ireo dia mihorona manodidina ny fampivondronana ireo mpianatra avy amin'ny lafy tsy mitovy amin'ny ady, na amin'ny alalàn'ny sekoly mitambatra, fandaharam-pianarana na fitsidihana tranonkala. Voamarina fa — raha atao fanamorana sy fepetra sahaza — ny fihaonana toy izany dia mety hiteraka fampihavanana kely, matetika (na dia tsy matetika) amin'ny alalàn'ny fahalalana ny fitantaran'ny hafa sy ny fomba fijeriny ny tantara.
Teoria momba ny mombamomba ny fiaraha-monina
Manam-pahaizana maro ihany koa no manatona ny resaka fampihavanana amin'ny alàlan'ny fanabeazana tantara avy amin'ny fomba fijery Theory Identity sosialy, izay mitazona ny famantarana ny tena miaraka amina vondrona iray manokana dia manatsara ny fiheverana tsara ny ingroup miaraka amin'ny stereotyping ratsy an'ny vondrona rehetra (jereo ny famerenana an'ity haisoratra ity ao amin'ny Korostelina 2013 ). Raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ny fihaonan'ny fanabeazana, ny maha-izy azy ary ny fifandonana, jereo ny Bellino and Williams (2017). Raha io fomba fijery teôlôjika io dia mihaodihaody be loatra amin'ny hypothèse contact amin'ny fanantitranterany ny fifandraisana misy eo amin'ny vondrona, manome rafitra tsara kokoa izy io hahatakarana ny fomba fihevitry ny olona momba ny ingroup-araka ny voafaritry ny tantaran'ny sary an-tsaina ny iray — na manampy na mampihena ny fihavanana.
Manokana, Korostelina (2013, 41-43) dia manome modely amin'ny famolavolana ny maha-izy azy amin'ny fanabeazana tantara, milaza ny fomba ahafahan'ny fampianarana momba ny lasa mandray anjara amin'ny fitondran-tena mifanohitra na amin'ny fomba hafa amin'ny "kolontsain'ny fandriam-pahalemana." Korostelina (2013) dia manamafy fa ny fanabeazana ny tantara dia afaka manamafy ny maha-izy azy, ary rehefa mifamatotra amin'ny hevitra momba ny zom-pirenena mifototra amin'ny fandeferana sy ny maha-olombelona iraisana izy ireo, dia afaka mandray anjara amin'ny fampihavanana. Ny fampianarana tantara dia afaka mandresy ny fahasamihafana sy ny fitovian'ny vondrona rehetra ao anatin'ny fiarahamonina koa ny fanabeazana ny tantara, izay mamorona fifandraisana tsara eo amin'ny vondrona. Ary farany, azo atao ny manabe ny fanabeazana ny tantara mba hamaritana ny firafitry ny herinaratra efa misy sy ny fanamarinana azy ireo, izay matetika tafiditra ao anaty fahatsiarovana fandrahonana an'ohatra eo amin'ny vondrona. Araka ny nosoratan'i Korostelina (2012, 195) tany an-kafa: "Ny fanabeazana ny tantara dia afaka miatrika ireo traumasy iraisana ary mandray anjara amin'ny fampihavanana amin'ny alàlan'ny fampivelarana ny maha-izy azy, ny fanamorana ny firaisankinan'ny fiaraha-monina ary ny famolavolana rafitra ara-pitondrantena maharesy lahatra." Araka izany, ny fanabeazana ny tantara dia mandray anjara amin'ny fampihavanana aorina sy amin'ny ho avy, mampifandray azy roa amin'ny alàlan'ny fandinihana ny mombamomba ny vondrona sosialy.
Vao tsy ela akory izay, ireo manam-pahaizana dia nanao ezaka mba hampitoviana ny elanelana misy eo amin'ny fanabeazana ny tantara sy ny fahatsiarovana ao amin'ny toerana misy ny fifandonana. Paulson sy ny mpiara-miasa aminy (2020) dia manamafy fa ny fanabeazana dia tokony hoheverina ho toerana fahatsiarovana ny fampianarana "tantara sarotra." Manokana izy ireo milaza fa ny fanabeazana ny tantara dia tsy fitaovam-pitaterana tantara an-tanindrazana na eken'ny fanjakana ao anatin'ny ezaka ambony atao mba hampiorenana ny fitadidiana iraisana. Voamarina kosa fa ny sekoly dia manome toerana ho an'ny fifaninanana sy ny fananganana fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny fifandraisana eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra, izay afaka "mikasa ny hanentana ny fampianarana tantara ho an'ny fampihavanana sy ny fananganana fandriam-pahalemana" (Paulson et al. 2020, 442). Ity asa fahatsiarovana ity dia mifamatotra amin'ny fizotran'ny fitsarana tetezamita lalindalina kokoa ao amin'ny fiarahamonina miady (post) amin'ny alàlan'ny fampidirana ny valin'ny kaomisiona marina sy ny fitsapana ny zon'olombelona amin'ny programa fanabeazana izay maharitra ela be taorian'ny fotoana naha tapitra ny fe-potoan'ny rafitra (Cole 2007, 121). Ankoatr'izay, ny fanabeazana ny tantara dia afaka manampy ny fitsarana tetezamita amin'ny fanekena ny fahavoazana taloha amin'ireo niharam-boina, ny fampianarana ny fomba demokratika ary ny fampiroboroboana ny fampihavanana (Cole 2007, 123).
Fomba fanatonana azo ampiharina
Pedagogy amin'ny fampianarana tantara
Betsaka ny fomba fijery pedagogika amin'ny fampianarana tantara nifaninana (jereo Elmersjö, Clark, and Vinterek 2017). Paulson sy ireo mpiara-miasa aminy (2020) dia misaintsaina ny fomba fampianarana pedogogika an'i Seixas (2004) momba ny fanabeazana tantara, izay voafaritra eto raha hiresaka. Voalohany, ny fomba "fahatsiarovana iraisana" dia manasongadina fitantarana tantara iray, izay mazàna novolavolain'ny olana nasionalista sy politika (Paulson et al. 2020, 440). Faharoa, ny fomba fiasa "postmodern" dia nalaina tamin'ny fomba fijery marobe mba hampisehoana ireo mpianatra amin'ny fitantarana marobe mba ho dinihina tsara, toy ireo voangona ao amin'ny boky mitantara tantara (Paulson et al. 2020, 440). Fahatelo, ny fomba "fitsipi-pifehezana" dia mikendry ny hanome fahatakarana ho an'ny mpianatra ny loharano sy ny fomba manohana ny famoronana fitantarana ara-tantara, mba hahafantaran'izy ireo ny fomba nalaina avy amin'ny zava-nitranga taloha (Paulson et al. 2020, 440-441). Ny famerenana ny literatiora nataon'i Paulson (2015) dia nanadihady ny fanabeazana ny tantara tany amin'ny firenena iraisana iraika ambin'ny folo, izay nahita fa ny mpampianatra dia matetika naka fomba fitadidy "fahatsiarovan-tena" amin'ny fampianarana izay nampandroso ny fitantarana nentim-paharazana etno-nasionalista. Na izany aza, i Paulson sy ireo mpiara-miasa aminy (2020, 441) dia nilaza tamin'ny farany fa ny fikarohana amin'ny ho avy dia tokony hifantoka amin'ny fomba fananganana fandaharam-pianarana tantara, ary koa ny fomba hiainan'ny mpampianatra sy ny mpianatra ny fampianarana tantara ao an-dakilasy ho toy ny asan'ny fahatsiarovana.
Nalaina avy tamin'ny fanadihadiana tranga momba ny fampianarana tantara tany amin'ny firenena ady (paositra) isan-karazany, Korostelina (2016) dia nanamarika fa ny fanavahana ny tantara "goavambe" sy ny "mitsikera" dia mbola olana iray amin'ny fampihavanana amin'ny fiarahamonina. Manokana indrindra, tantara goavambe ampiasain'ny fitondrana fifandonana (post) hanaparitahana fitantarana angano izay maharitra ny fanjakan'izy ireo amin'ny alàlan'ny mekanisma toy ny fanomezam-boninahitra ny ingroup sy ny fanamelohana ho an'ny vondrona (Korostelina 2016, 291). Na izany aza, ny fampidirana tantaram-pitsikerana dia mety hanasarotra ny fitantarana be dia be amin'ny alàlan'ny fampidirana fandikana maro momba ny lasa ary hiadiana amin'ny antony mahatonga ny herisetra (Korostelina 2016, 293-294). Ny tantara mitsikera toy izany dia afaka mandray anjara amin'ny fampihavanana, satria "ny fifanoherana eo amin'ny vondrona sosialy izay heverina fa tsy azo ovaina dia azo adika ihany; ny fifanolanana dia azo ovaina ho fiaraha-miasa azo atao ”(Korostelina 2016, 294).
Ny fampianarana tantara ao amin'ny fiarahamonina mizarazara dia tokony ahafahan'ny mpianatra mandray anjara mavitrika amin'ny dingan'ny fahazoana fahalalana mifantoka amin'ny famotopotorana mitsikera.
Ny hafa kosa dia nanamafy fa ny fampianarana tantara any amin'ny fiarahamonina mizarazara dia tokony hahafahan'ny mpianatra mandray anjara mavitrika amin'ny fizotran'ny fahalalana arakaraka ny famotopotorana. Manokana, i McCully (2010, 216) dia nilaza fa ny fampianarana tantara dia mandray anjara amin'ny fandriampahalemana rehefa: 1) manome ny mpianatra fahaizana misaina mitsikera; 2) mampiasa loharanom-pahalalana izay manome ho an'ny multiperspectivity; 3) mamporisika ny fahatakarana ny fiheverana ny "hafa"; ary 4) mampiorina ny soatoavina demokratika amin'ny alàlan'ny adihevitra misokatra sy andraisan'ny rehetra anjara. Na izany aza, i McCully (2010, 214) dia nampitandrina fa ny mpanabe dia tsy maintsy mihevitra ny fomba fifandraisan'ny fampianarana tantara amin'ny politika momba ny maha-izy azy any amin'ny fiaraha-monina iadiana. Manoloana izany indrindra dia tokony ho ekena fa — miankina amin'ny sahan-kevitra sy ny fahatsapan'ny politika ny atiny fanabeazana - ny mpampianatra dia mety mila miomana handray anjara amin'ny "fanaovana risika" hanenjehana ny fiovana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fampianarana tantara (McCully 2010, 215) . Any Etazonia, ny fandraisana andraikitra vao haingana Educating for American Democracy (EAD) dia manantitrantitra ihany koa ny famotopotorana kritika ho toy ny fitsipika pedagojika hampifandray ny fanabeazana amerikana sy ny sivika. Ny EAD dia nanamafy fa: "Ny rehetra dia mendrika fanabeazana manohana ny" fitiavan-tanindrazana taratra ": fankasitrahana ny filamatra ny filaminantsika ara-politika, ny fiheverana mivantana ny tsy fahombiazan'ny firenena hanaraka ireo filamatra ireo, ny antony manosika handray andraikitra amin'ny fitondrana tena, ary mandinika fahaiza-miady hevitra momba ireo fanamby atrehinay ankehitriny sy ho avy ”(EAD 2021, 12). Na dia tsy mametraka mazava ny asany ho fampihavanana aza ny EAD, dia nanaiky ny maha-zava-dehibe ny ady amin'ny tantara mitsikera mba hananganana ho avy demokratika kokoa amin'ny fiaraha-monina polarized.
Ao amin'ny famintinan'izy ireo ny fomba pedagogical, Skårås (2019, 520) dia nanampy “fisorohana” ho fanampin'ny “fitantarana tokana” sy ny fomba fiasa “multiperspectivity” amin'ny fampianarana tantara. Skårås (2019, 522) dia nanamarika fa ny fisorohana dia mety ho safidy tsara indrindra amin'ny toe-javatra izay mbola miaina tsy fandriam-pahalemana avo lenta; nanoratra momba ny fikarohana etnografika momba ny fampianarana any South Sudan, Skårås nanamarika hoe: "Loza atahorana ho fiarovana ny efitrano fianarana marobe noho ny kolontsaina satria tsy misy olona mahalala mazava izay mifanitsy amin'iza amin'ny ady an-trano ataon'ny mpianatra sy ny mpampianatra aorian'ny fotoam-pianarana." Noho izany, ny tantara mitsikera dia azo soloina tantara iray tokana rehefa mijanona ny fifandonana, tsy mahomby amin'ny famahana ny antony mahatonga ny herisetra na hampiroborobo ny fandriampahalemana maharitra (Skårås 2019, 531-532). Torak'izany koa, Korostelina (2016, 302-304) dia manamarika ny fomba fiarahamonina sasany mety hampiroborobo ny "tantaram-pifidianana" izay manilika ny mombamomba ny herisetra taloha mba hialana amin'ny famerenana ireo fomba fijery ratsy avy amin'ny vondrona ratsy, mba hisian'ny fandriam-pahalemana; na izany aza, ny tantara tsy dia misy dikany sy tsy manaja dia tena manimba ny fihavanana. Pingel (2008) dia nanako ny fomba mety hampiharana ny fisorohana avy any ambony ka hatrany, rehefa tsy liana amin'ny fampianarana momba ny tantara sarotra ny governemanta (post). Pingel (2008, 185-187) dia nanamarika ny fomba nanakanana ny fampianarana tantara tany Rwanda taorian'ny fandripahana foko, ny fiezahana hamorona fitantaràna maoderina vaovao nijanona tany Afrika atsimo taorian'ny apartheid, ary ny fampianarana manokana nanasaraka ny tantaran'olon-tokana tany Bosnia sy Herzegovina. Pingel (2008, 187) dia nandinika tamim-pessimistika fa: "Ny fahalianana voalohany amin'ny fahitana ny antony ara-tantara nahatonga ny herisetra sy ny fifandonana teo amin'ny fiarahamonina dia voasaron'ny politika fahatsiarovan-tena izay mamintina na manala ny lasa amin'ny fifaninanana."
Na eo aza ny teritery politika misy eo amin'ny tontolon'ny fifanolanana (paositra), dia nisy ny ezaka natao hampianarana tantara sarotra tany amin'ny firenena maro samihafa mba hampidirina ao anaty fandaharam-pianarana ny fahitana marimaritra iraisana sy tantara mitsikera. Ny fizarana manaraka dia mamintina tranga vitsivitsy niavaka izay nampiasaina ny fanabeazana ny tantara - tamin'ny alàlan'ny famerenana ireo boky sy fampianarana ireo tantara nifaninana - mba hampihavana.
Famerenana ireo boky momba ny tantara
Ny manam-pahaizana sasany dia nifantoka tamin'ny famerenana ireo boky momba ny tantara ao amin'ny toerana misy ny fifandonana ho toy ny fotoana ahafahana manohy mihavana. Ohatra, fanjakana sy faritra maromaro no nanana tetik'asa handrafetana tantara mitambatra amin'ny alàlan'ny boky, ao anatin'izany ny Tetikasa Joint History any atsimo atsinanan'i Eropa, ny Tetikasa momba ny tantaram-pizarana tarihin'ny Peace Research Institute any Moyen Orient (PRIME) any Israel-Palestine, ary ny Tbilisi Initiative any amin'ny faritra Kaokazy atsimo (ho an'ny fandalinana tranga amin'ny an-tsipiriany, jereo Korostelina 2012). Rehefa avy niatrika olana tsy tambo isaina momba ny fandrindrana ary koa sakana politika, ny tsirairay amin'ireo tetikasa ireo dia namokatra lahatsoratra fanabeazana izay maneho ny tantara tsy mitovy amin'ny vondrona isan-karazany. Ny valin'ireto tetik'asa ireto dia tsy ny famoronana tantara foronina, tantara nozaraina hanoloana ny fitantarana taloha; Fa kosa, nametraka tantara hafa nifanila tamin'izy ireo izy ireo, niantehitra tamin'ny "fahamaroan'ny fahitana" hanamafisana ny fifankahazoan-kevitra sy hanomezana fotoana hihaikana ny hevitry ny maha-izy azy (Korostelina 2012, 211-213). Vokatr'izany, ireo tetik'asa ireo dia mandray anjara amin'ny fampihavanana amin'ny alàlan'ny famokarana fitaovam-pampianarana hanovana ny fomba fijerin'ny mpianatra ny fifandraisana misy eo amin'ny vondrona mandritra ny fotoana maharitra ary amin'ny famoronana fora ho an'ny dinika iraisan'ny vondrona amin'ny alàlan'ny komity sy ireo vondrona miasa izay mivory vetivety mba hifanakalo hevitra momba ny tantaram-piaraha-miasa.
Ny fanamafisana ity singa ifanakalozan-kevitra ity dia atrikasa fanitsiana ny fandaharam-pianarana tantara nifanaraka tamin'ny Metro (2013) ho fihaonan'ireo vondrona, mifantoka amin'ny fomba ahafahan'ny fifandraisana eo amin'ireo mpandray anjara amin'ny fanabeazana manome fotoana iray hanaovana fampihavanana kely. Miorina amin'ny fanadihadiana ara-poko momba ny fomba nanatonan'ireo mpifindra monina Birmanina maro karazana sy mpitsoa-ponenana tao Thailand ny fanitsiana ny fandaharam-pianarana tantara, Metro (2013, 146) dia manoritra dingana enina amin'ny fampihavanana iraisan'ny vondrona, ao anatin'izany ny: "1) fihainoana ny tantaran'ny foko hafa; 2) mahatsapa fa misy fomba fijery marobe amin'ny tantara misy; 3) "miditra amin'ny kiraro" an'ny hafa; 4) fitantarana sarotra momba ny maha-izy azy; 5) fampisehoana ny fizarazarana ara-poko amin'ny foko hafa; ary 6) fifandraisan'ny foko sy ny firenena. ” Notsindrian'i Metro (2013, 146) fa tsy hipoitra amin'ny fomba mivantana ity fomba ity ary mijanona ny sakana - ao anatin'izany ny fifanenjanana eo amin'ny samy lahy na vavy, ny sakana amin'ny fiteny ary ny tebiteby momba ny fisainana mitsikera - na dia vokatra tsara aza no notaterina tamin'ilay maodely.
Raha mamela ny fampihavanana ny fizotran'ny famoronana tantara iraisana, dia mijanona eo ihany ny tsy fahampian'ny porofo mampiseho ny fiantraikany maharitra amin'ireo ezaka ireo. Manokana indrindra, na dia voatendry aza ny boky iraisana, dia matetika no heverina fa hampiasaina any an-dakilasy, izay mety tsy dia izany (jereo Paulson et al. 2020, 441). Ny fandinihana misimisy kokoa momba ny fampiasana ny boky fampianarana tantara iraisana ao an-dakilasy - ary vokatr'izany dia misy fiatraikany amin'ny fihetsika sy ny fitondran-tena amin'ny fampihavanana eo amin'ny samy mpianatra (jereo Skårås 2019, 517). Tamin'ny ohatra iray tamin'ny fikarohana toy izany, Rohde (2013, 187) dia nandinika ny tetikasan'ny boky fampianarana PRIME, nahita fa ireo voarohirohy amin'ny famoronana boky dia nahita fa sarotra ny mandika “fotoana fifampiresahana” amin'ny hafa ankoatry ny fihaonany mifandraika amin'ny fidirana an-tsehatra sy amin'ny fiainana andavanandro. Ankoatr'izay, ny mpianatra israeliana sy palestiniana izay nampiasa ny boky nifanilaina kilasy tao an-dakilasy dia samy hafa ny fihetsiky ny famoahana ny fitantaran'ny iray hafa, miainga amin'ny fandavana ny fisokafana (Rohde 2013, 187). Noho izany, mbola tsy mazava ny valim-pihavanana vita tamin'ny alàlan'ny tetik'asa momba ny boky fampianarana miaraka amin'ny vokatra maharitra sy malalaka ary tsara.
Fampianarana fitantarana mifamaly amin'ny sehatra fanabeazana eo anelanelan'ny sy ny Intragroup
Fomba iray azo ampiharina iray hafa izay mifantoka amin'ny fampianarana tantara mitantara tantara nifanaovana tamin'ny mpianatra amin'ny sehatry ny fanabeazana mba hampiroboroboana ny fampihavanana. Salomon (2006, 45) dia nanamarika fa ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia miteraka fahasamihafana amin'ny fifanolanana tsy azo tsaboina rehefa miteraka fiovana amin'ny fitantaran'ny vondrona, izay matetika miorina amin'ny fahatakarana ny tantara. Fanelanelanana amin'ny fanabeazana natao hanasarotana sy hifaninanana amin'ireo fitantarana natanjaka indrindra fa ny fifandirana solika dia nampiasaina na teo amin'ny sehatra interagroup na interagroup, miaraka amin'ny valiny samihafa.
Ny fampianarana tantara mitohy amin'ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia manintona betsaka amin'ny "hypothèse contact", amin'ny fanolorana hevitra fa ny fifanakalozana fitantarana amin'ny alàlan'ny fihaonan'ireo vondrona dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny fifandraisan'izy ireo. Raha voafetra ny fahafaha-mitaky fifanakalozana toy izany amin'ny fisarahan'ny rafitry ny sekoly, dia mety hanome làlana mankany amin'ny fampihavanana ny fanesorana. Ohatra, fanadihadiana iray natao ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany sy anjerimanontolo maherin'ny 3,000 tany Yugoslavia teo aloha dia nahitana fa ny mpianatra dia nilaza fa mino izy ireo fa azo atao ny mihavana raha mpianatra amin'ny sekoly ambongadiny (Meernik et al. 2016, 425). Ny fanadihadiana iray nataon'i Schulz (2008) dia nahatafiditra mivantana ny fandinihana ny mpianatra israeliana sy palestiniana nisoratra anarana tamina programa iray an'ny tompony momba ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana. Ny fandinihana dia nahitana fa ny lesona momba ny tantaran'ny fifanolanana israeliana-palestiniana dia nahatonga ny mpianatra hanana fahatakarana ara-tsaina ny fomba fijerin'ny hafa nefa koa nampitombo ny fihetsika ratsy ara-pihetseham-po rehefa nitady hiaro ny fitantarana ny ingroup (Schulz 2008, 41-42) ny mpianatra. Anisan'ireo fetran'ity fomba fiasa iraisan'ny vondrona ity amin'ny fanabeazana ny fahasarotana amin'ny fandrefesana ny fiovan'ny fihetsika sy ny fifandraisana voahodina ao an-dakilasy aorian'ny fahavitan'ny programa ary noho izany dia misy fiantraikany amin'ny fampihavanana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa (jereo Schulz 2008, 46-47). Satria vitsy ny fandalinana ny fampianarana tantara ao amin'ny sehatra misy ny vondrona, izany dia mety hanondro ireo fahasarotana amin'ny fampivondronana ireo vondrona mifanohitra teo aloha eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny filàna fikarohana fanampiny.
Ny fidirana an-tsekoly hafa dia natao indrindra ho an'ny ambaratonga intragroup, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fahitan'ny mpianatra ny ingroup ary koa ny hafa tsy misy ankehitriny ny fampianarana ny fitantarana tantara nifaninana. Ohatra, i Ben David sy ireo mpiara-miasa aminy (2017) dia nanao dinika fidirana an-tsokosoko niaraka tamin'ny mpianatra latsaky ny jiosy-israeliana tamin'ny alàlan'ny seminera iray nifantohana tamin'ny fandinihana ireo fitantarana iraisana sy ny mombamomba ny israeliana sy palestiniana. Hitan'izy ireo fa "ny fifanakalozan-dresaka an-tsokosoko dia nanome toerana azo antoka hiatrehana ny fiantraikan'ny fifandonana eo amin'ny mombamomba ny mpandray anjara, amin'ny fomba izay mampiroborobo ny fahavonona amin'ny fampihavanana" (Ben David et al. 2017, 275). Meernik sy ny mpiara-miasa aminy (2016, 427) dia nahatsikaritra fa ny mpianatra tany Yugoslavia teo aloha (amin'ny sekoly homogenous sy étudiant) dia niaiky ny andraikitry ny vondrom-poko misy azy ireo ao anatin'ny fifanolanana ary niaiky ny fiatraikany tsara navoakan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ho an'ny heloka bevava. , manolotra ny maha-zava-dehibe ny fampianarana momba ireo lohahevitra ireo. Na izany aza, ny fampianarana tantara izay manasongadina ny maha-meloka ny ingroup dia tsy mampiroborobo ny fifandraisana tsara eo amin'ny vondrona. Bilewicz sy ny mpiara-miasa (2017) dia mampiseho fa ny fanabeazana ny tantaran'ny Holocaust teo amin'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa Alemanina sy Poloney dia tsy nisy fiatraikany firy tamin'ny fanatsarana ny fihetsika antisemitika. Ilaina ny fikarohana bebe kokoa hahafantarana hoe rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no mitarika ny fiovan'ny toe-tsaina eo amin'ny samy mpianatra manoloana ny fandeferana sy ny fampihavanana ny fampianarana ny fitantarana tantara nifaninana. Na dia misy aza ny literatiora ara-tsosialy-ara-tsosialy misy fanadihadiana maro momba ny fifanakalozan-kevitra eo anelanelan'ny sekoly (ohatra, jereo ny famerenana ny literatiora ao amin'ny Ben David et al. 2017), tokony hifantohana bebe kokoa ny fiantraikan'ny fifanakalozan-kevitra ara-tantara amin'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny fampihavanana.
Ity lahatsoratra ity dia nanome topimaso fohy momba ny fanjakan'ny fikarohana mampifandray ny fanabeazana ny tantara sy ny fampihavanana amin'ny (post) fifandonana toerana. Ho famaranana, ireto misy soso-kevitra marimaritra iraisana avy amin'ity haisoratra ity ho an'ireo mpanabe, mpanao politika ary ireo manam-pahaizana etsy ambany:
Fadio ny mampianatra fitantarana tantara iray ilaina: Ampidiro ny multiperspectivity hikajiana ny fomba fijerin'ny lafiny rehetra amin'ny fifanolanana. Mety ho tratra izany amin'ny alàlan'ny fanaovana fandaharana fandaharam-pianarana avy amin'ireo tetik'asa mitambatra mba hanomezana vahaolana hafa ho an'ny fitantarana mitongilana. Amin'ny fomba manokana, "Ny fandaharam-pianarana tantara dia tokony hanasongadinana ny fomba nijalian'ny vondrona rehetra teo amin'ny fiarahamonina iray, ampidirina ny adihevitra momba ny antony sy ny fomba nanaratsiana olona azy ireo ary nampiharihary demonia, ary asehoy ny fomba nanamarinana ny fanavakavahana sy ny herisetra" (Korostelina 2012, 196-197 ).
Mampiroborobo ny fisainana kritika amin'ny fampianarana tantara: Amin'ny teôria, ny fanentanana ny fanakianana fitsikerana ho fomba pedagogika ao an-dakilasy dia afaka manohana ny fampihavanana sy ny demokrasia (jereo EAD 2021 sy McCully 2010). Araka ny nomarihin'i Korostelina (2016, 306): “Mampiroborobo ny zom-pirenena mavitrika, ny fisainana mitsikera ary ny fahaizana mamantatra ny fanodinkodinam-piaraha-monina, noho izany, manakana ny fiverimberenan'ny herisetra.” Ny fampianarana ny tantara dia tokony hanasongadina ny fahalianana sy ny fanontaniana.
Mampiasà fomba fampianarana amin'ny famoronana mba hamoahana ireo fandrahonana amin'ny maha-izy anao: Ny teknika sasany dia misy: 1) manasongadina ny fiaraha-miory amin'ny vondrona iharan'izany noho ny fahatsapany ho meloka amin'ny fifandraisany amin'ilay vondrona nahavanon-doza; 2) miantehitra amin'ny fitantarana momba ny ohatra maodely sy mpanampy mahery fo ho toerana fidirana tsy dia atahorana handinihana tantara nifamaly; ary 3) mifantoka amin'ny tantara eo an-toerana (fa tsy ny tantaram-pirenena) izay ahafahan'izy ireo manokana ny tantara (Bilewicz et al. 2017, 183-187). Ho fanampin'izany, ny fifanakalozan-kevitra ataon'ny vondrona iraisana dia mety hialohavan'ny fifanakalozan-kevitra ao anaty sehatra fanabeazana, izay ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny ingroup mikaroka fitantarana izay mety mihantsy ny mombamomba azy ireo amin'ny toerana tsy dia atahorana loatra (jereo Ben David et al. 2017).
Fantaro ny maso ivoahan'ny mpampianatra sy mpianatra tantara: Na dia mety hanana tombontsoa politika amin'ny fanaparitahana ny fitantarana nasionalista manokana aza ny fanjakana (post), ny mpianatra sy ny mpampianatra dia manana maso ivoho manan-danja ao an-dakilasy mba “hirotsaka, hamaky na tsy hiraharaha” azy ireo (Paulson et al. 2020, 444). Rehefa nesorina tamin'ny fanabeazana voasazy ofisialy ny fitantarana tantara samihafa, ny mpampianatra, ny mpianatra ary ny vondrom-piarahamonina dia afaka mamorona toerana sy fotoana tsy ara-potoana hanaovana fampihavanana (jereo ny ohatra iray amin'ny vondrom-piarahamonina Silamo sy Tamil iray any Sri Lanka avy amin'i Duncan sy Lope Cardozo 2017).
Amporisiho ny Fifandraisan'ny vondrona amin'ny fianarana: Ny sehatry ny fanabeazana dia azo ampiasaina hampiantsoana ireo mpianatra avy amin'ny antoko mifanipaka, ahafahan'izy ireo mifampianatra sy mifampiresaka. Ireo fifandraisan-davitra ireo dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fifanolanana misy eo amin'ny vondrona sy ny fanatsarana ny fahatakarana, na dia tokony hatsangana ho tontolo azo antoka aza ny tontolo iainana ka azo ovaina amin'ny fomba mahomby ny tsy fifanarahana momba ny olana ara-tantara saro-pady (jereo Schulz 2008). Ireo sekoly manala baraka dia afaka manampy amin'ny fandresena ny sakana amin'ny fampihavanana (jereo ny Meernik et al. 2016 sy Pingel 2008 momba ny zavatra niainana tany Yugoslavia teo aloha).
Ampifandraiso amin'ireo fizotran'ny fitsarana tetezamita ny fanabeazana ny tantara: Na dia ekena ho lafiny iray lehibe amin'ny fitsipiky ny tetezamita aza ny fahatsiarovana, ny fiheverana dia tokony hihoatra ny tranombakoka, tsangambato ary fahatsiarovana hampidirana ny fampianarana ho toerana fahatsiarovana (jereo Cole 2007 sy Paulson et al. 2020). Ankoatr'izay, i Pingel (2008, 194) dia nanamarika fa kely ny ezaka natao tamin'ny fampidirana ireo "fahamarinana" izay naseho ny vaomiera na fitsapana ny fahamarinana teo amin'ny fanabeazana ny tantara, izay manondro ny toetra voafitak'ireo rafitra ara-pitsarana tetezamita ireo sy ny fomba ahafahan'ny fahanginana maharitra mandritra ny fandrindrana tsy ampy.
Fikarohana ny fiantraikan'ny fanabeazana ny tantara amin'ny fiarahamonina ady (Paositra): Araka ny nasehon'ity lahatsoratra ity, ilaina ny fikarohana bebe kokoa hahafantarana ny fiantraikan'ny fanabeazana tantara amin'ny fiarahamonina (aorian'ny) fifandonana. Ny fandinihana amin'ny ho avy dia tokony hikatsaka ny hanombanana ny fandraisana anjaran'ny fanabeazana ny tantara amin'ny vokatra manokana, toy ny mety hisian'ny fifandonana na ny fahatsapana ny fampihavanana (jereo Paulson 2015, 37). Ny fandinihana fanampiny dia afaka mamantatra raha ny fomba azo ampiharina eto (ao anatin'izany ny pedagogies manokana) dia misy fiatraikany maharitra amin'ny fampihavanana amin'ny sehatra manokana, nasionaly ary iraisam-pirenena.
Allport, Gordon W. 1954. Ny toetran'ny fitsarana an-tendrony. London: Addison-Wesley.
Bellino, Michelle J., ary James H. Williams, eds. 2017. (Re) Fahatsiarovana mamorona: Fampianarana, mombamomba azy ary fifanolanana. Rotterdam: Mpamoaka Sense.
Ben David, Yael, Boaz Hameiri, Sharón Benheim, Becky Leshem, Anat Sarid, Michael Sternberg, Arie Nadler, ary Shifra Sagy. 2017. "Fikarohana ny tenantsika ao anatin'ny fifanolanana misy eo amin'ny vondrona: ny anjara andraikitry ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fampidirana ny fanekena ny fitantarana iraisan'ny rehetra sy ny fahavononanana mankany amin'ny fampihavanana." Fiadanana sy fifandonana: Journal of Psychology 23, tsia. 3: 269-277.
Bilewicz, Michal, Marta Witkowska, Silviana Stubig, Marta Beneda, ary Roland Imhoff. 2017. "Ahoana ny fomba hampianarana momba ny famonoana olona? Sakana ara-tsaina amin'ny fanabeazana ara-tantara any Polonina sy Alemana. ” Ao amin'ny Fanabeazana tantara sy fanovana fifanolanana: teôria ara-tsaina ara-tsosialy, fampianarana sy fampihavanana momba ny tantara, natontan'i Charis Psaltis, Mario Carretero, ary Sabina Čehajić-Clancy, 169-197. Cham, Suisse: Palgrave Macmillan.
Brahm, Eric. 2006. “Fanabeazana ny fandriam-pahalemana.” Beyond Intractability, natontan'i Guy Burgess sy Heidi Burgess. Boulder: Consortium fampahalalana momba ny fifanolanana, University of Colorado. https://www.beyondintractability.org/essay/peace-education
Cole, Elizabeth A. 2007. “Justice Transitional and the Reform of History Education.” Gazety iraisam-pirenena momba ny fitsarana tetezamita 1: 115-137.
Duncan, Ross, ary Mieke Lope Cardozo. 2017. "Famerenana amin'ny laoniny ny fampihavanana amin'ny alàlan'ny fanabeazana ho an'ireo Silamo sy Tamilin'ny ady taorian'ny Jaffna, Sri Lanka." Fikarohana amin'ny fanabeazana mampitaha sy iraisam-pirenena 12, tsia. 1: 76-94.
Fanabeazana ho an'ny demokrasia amerikana (EAD). 2021. "Fanabeazana ho an'ny demokrasia amerikana: hatsarana amin'ny tantara sy ny sivika ho an'ny mianatra rehetra." iCivics. www.nirfoform.org
Elmersjö, Henrik Åström, Anna Clark, ary Monika Vinterek, eds. 2017. Fomba fijery iraisam-pirenena momba ny fampianarana tantara mitantara fifaninanana: valiny ara-pedagogika amin'ny fitantarana nifaninana sy ny ady tamin'ny tantara. Londres: Palgrave Macmillan.
Korostelina, Karina V. 2012. “Afaka Manasitrana Trauma ve ny Tantara? Ny anjara asan'ny fanabeazana tantara amin'ny fizotran'ny fampihavanana. ” Ao amin'ny Fananganana fandriam-pahalemana, fahatsiarovana ary fampihavanana: fanatontosana ny fidirana ambony sy ambany ary ambany, natontan'i Bruno Charbonneau sy Geneviève Parent, 195-214. New York: RoutXNUMX.
Korostelina, Karina V. 2013. Fampianarana tantara amin'ny famolavolana ny mombamomba ny fiaraha-monina: mankany amin'ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana. New York: Palgrave Macmillan.
Korostelina, Karina V. 2016. “Fampianarana tantara eo afovoan'ny fanarenana aorian'ny fifandonana: lesona ianarana.” Ao amin'ny Afaka manaikitra ny tantara: Fanabeazana tantara amin'ny fiaraha-monina mizarazara sy aorian'ny ady, natontan'i Denise Bentrovato, Karina V. Korostelina, ary Martina Schulze, 289-309. Göttingen, Alemana: V&R Unipress.
Mania, Eric W., Samuel L. Gaertner, Blake M. Riek, John F. Dovidio, Marika J. Lamoreaux, ary Stacy A. Direso. 2010. "Fifandraisan'ny vondrona: fiatraikany amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana." Ao amin'ny Boky torolàlana momba ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana, natontan'i Gavriel Salomon sy Edward Cairns, 87-102. New York: Gazety Psychology.
McCully, Alan. 2010. "Ny fandraisana anjara amin'ny fampianarana ny tantara amin'ny fananganana fandriam-pahalemana." Ao amin'ny Boky torolàlana momba ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana, natontan'i Gavriel Salomon sy Edward Cairns, 213-222. New York: Gazety Psychology.
Meernik, James, Nenad Golcevski, Melissa McKay, Ayal Feinberg, Kimi King, ary Roman Krastev. 2016. “Fahamarinana, fahamarinana ary fanabeazana: mankany amin'ny fampihavanana any Yugoslavia teo aloha.” Fianarana any Eoropa atsimo sy atsimo atsinanana 16, tsia. 3: 413-431.
Metro, Rosalie. 2013. “Fanitsiana ny fandaharam-pianarana momba ny tantara taorian'ny fifandonana ho“ fihaonana anelanelan'ny vondrona ”hampiroboroboana ny fampihavanana eo amin'ny samy mpivady sy ny mpitsoa-ponenana ao Birmania.” Famerenana fanabeazana fampitahana 57, tsia. 1: 145-168.
Paulson, Julia. 2015. "'Fa na amin'ny fomba ahoana?' Fampianarana tantara momba ny fifanolanana farany sy maharitra: famerenana ny fikarohana. ” Gazety momba ny fampianarana amin'ny vonjy taitra 1, tsia. 1: 115-141.
Paulson, Julia, Nelson Abiti, Julian Bermeo Osorio, Carlos Arturo Charria Hernández, Duong Keo, Peter Manning, Lizzi O. Milligan, Kate Moles, Catriona Pennell, Sangar Salih, ary Kelsey Shanks. 2020. "Fanabeazana ho toy ny toera fitadidiana: fampivelarana fandaharam-potoanan'ny fikarohana." Fianarana iraisam-pirenena amin'ny sosiolojia momba ny fanabeazana 29, tsia. 4: 429-451.
Pingel, Falk. 2008. “Azo ifampiraharahana ve ny marina? Ny fanitsiana ny boky momba ny tantara momba ny fampihavanana. ” Ny taom-pinoana Amerikana momba ny politika sy sosialy 617, tsia. 1: 181-198.
Rohde, Achim. 2013. “Fianarana ny tantaram-piainan'ny tsirairay - sarintany mankamin'ny fandriampahalemana any Israel / Palestine?” Ao amin'ny Fampianarana tantara sy fampihavanana aorian'ny fifandonana: Tetikasa momba ny boky iraisana, natontan'i Karina V. Korostelina sy Simone Lässig, 177-191. New York: RoutXNUMX.
Salomon, Gavriel. 2006. “Miavaka tokoa ve ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana?” Fiadanana sy fifandonana: Journal of Psychology 12, tsia. 1: 37-48.
Schulz, Michael. 2008. "Fampihavanana amin'ny alàlan'ny fanabeazana - fanandramana avy amin'ny fifanolanana israeliana-palestiniana." Gazety fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana 5, tsia. 1: 33-48.
Seixas, Peter, ed. 2004. Fahatsiarovan-tena momba ny tantara. Toronto: University of Toronto Press.
Skårås, Merethe. 2019. "Fananganana fitantarana nasionaly amin'ny ady an-trano: fampianarana amin'ny fiteny sy firaisam-pirenena ao Sudan atsimo." Fanabeazana mampitaha 55, tsia. 4: 517-535.
Fampianarana # tantara
# fandriam-pahalemana aorian'ny ady
Mosarena ny Taliban - sa ny vahoaka Afgana?
Miantso ny taratasy: Olana manokana an'ny Factis Pax momba ny fananganana fandriam-pahalemana ao anatin'ny tontolon'ny ady
March 3, 2017 Fampitaham-baovao 0
Ao amin'ny Factis Pax dia manasa taratasy handefasana ny olana manokana momba ny fananganana fandriam-pahalemana ao anatin'ny tontolon'ny ady aorian'ny fifandonana tany Kolombia mba hamaranana ny ady dimampolo taona, ary ny ezaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana sy ny fananganana fandriam-pahalemana amin'ny fanovana ny fiarahamonina. sy ny kolontsaina. [tohizo ny famakiana…]
Fambolena fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fampianarana tantara ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa any Rwanda: ireo vintana sy fanamby
Oktobra 5, 2018 Research 0
Tany Rwanda, ny fanabeazana ofisialy talohan'ny 1994 dia nanjary fitaovana hampirisihana ny herisetra. Tao anatin'ny 23 taona taorian'ny fandripahana, ny governemanta Rwanda dia nanaparitaka ny fanabeazana izay mampiroborobo ny firaisam-pirenena ary mampihena ny fisaraham-bazana eo amin'ireo mpianatra. Ny fandaharam-pianarana miorina amin'ny fahaiza-manao 2015 izay mampiditra ny Fanabeazana ho an'ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia ohatra iray manandanja. [tohizo ny famakiana…]
Fampianarana tantara sy fanovana ady
Oktobra 3, 2017 Fampitaham-baovao 0
Ity volavolan-dalàna ity dia miresaka momba ny vokany, ny maodely ary ny fiantraikan'ny fampianarana tantara mifandraika amin'ny fanovana ny fifanoherana sy ny fampihavanana amin'ny fomba fijery ara-tsosialy-psikolojika. Manome fikarohana lalina momba ny andraikitry ny fitantarana ara-tantara, ny fampianarana tantara, ny boky momba ny tantara ary ny asan'ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena amin'ireo fiarahamonina aorian'ny ady izay eo am-panaovana ny fizotran'ny fampihavanana. [tohizo ny famakiana…]